Mitolona amin’ny fanenjehana noho ny fanaovana tatitra momba ny fanonganam-panjakana ny mpanao gazety ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
"Miady mafy ny ankamaroanay ary mijaly ny fianakavianay"
Voadika ny 07 Jolay 2021 4:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, Ελληνικά, English
Tsy mitsahatra mitatitra ny fihetsiketsehana manohitra ny fanonganam-panjakana ireo mpitati-baovao sy mpanao gazety olon-tsotra na eo aza ny tranga fanafihana mikendry azy ireo. Sarin'ny fihetsiketsehana tao Yangon nozarain'ny mpanao gazety olon-tsotra tamin'ny Global Voices
Mpanao gazety manodidina ny 87 no voasambotra hatramin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana Febroary tao Myanmar hatramin'ny 17 Jona. Nandositra ny tranony ny ankamaroan'ny mpanao gazety, ary ny sasany aza nahavita nitsoaka tany amin'ireo firenena mifanila aminy mihitsy. Nandritra izany fotoana izany dia noterena hiafina ireo mpampahalala vaovao tsy miankina voarara mba hanohizany ny asany.
Niresaka tamin'ny mpanao gazety maro monina ao Myanmar momba ny zavatra niainany nandritra ny herinandro voalohany tamin'ny fanonganam-panjakana i Phil Thornton, mpanao gazety sady lehiben'ny mpanolotsaina ao amin'ny Federasiona Iraisam-pirenena ho an'ny Mpanao Gazety any Azia Atsimo Atsinanana:
Nanomboka nalain'izy ireo aloha ny karatra famantarana azy ireo. Lasibatra ankehitriny ny sary famantarana ny GAZETY. Tahotra lehibe ny tsy famantarana hoe aiza ny mpitifitra miafina, mila fiarovana amin'ny bala isika izao.
Tsy izaho irery no mpanao gazety fa maro aminay no miafina ankehitriny. Atahorana ny eto an-toerana ankehitriny. Tsy afaka mampiasa ny anaranay izahay amin'ny fitantaranay. Mihasarotra ny hahatafavoahana velona satria tsy omena karama izahay. Miady mafy ny ankamaroanay ary mijaly ny fianakavianay… goavana ny tsindry.
Any amin'ny hotelin'ny mpiara-miasa amin'ny tompon'andraikitra miaramila ny mpanao gazety sasany no tsy maintsy miditra amin'ny aterineto. Nizara ity tenin'ny mpanao gazety iray nitafa taminy ity i Thornton:
Tapaka ny angondrakitra finday, sarotra ny miditra ADSL, mahavoasambotra ny fahatrarana anao miaraka amin'ny boaty Wi-Fi . Niezaka niditra tamin'ny Wifi an'ny hotelin'ny mpiaramiasa ao amin'ny tafika aho.
Niaiky ny anjara asan'ny olon-tsotra mpanao gazety amin'ny fanomezana vaovao tsara ho fantatra momba ny toe-draharaha any an-toerana ilay mpanao gazety mahaleotena Thin Lei Win, izay nanorina ny tranonkalam-baovao Myanmar Now:
Mahazo fanampiana betsaka amin'ny olon-tsotra ny asa fanaovan-gazety. Mahagaga ny nanombohan'ireto mpanao gazety olon-tsotra nanao tatitra tamin'ny alàlan'ny finday ny zava-nitranga rehetra ary nampita izany tamin'ny mpanao gazety matihanina. Nanome vaovao anay ireo mpanao gazety olon-tsotra ireo, na tany ivelan'ny firenena na tato anatiny – momba ny zava-nitranga. Raha ny marina, ny fifampitokisana eo amin'ny mpampahalala vaovao sy ny vahoaka no antony nahavitan'ny mpampahalala vaovao toa ny Myanmar NOW sy ny hafa sasany nanao tatitra.
Rehefa nihamafy ny hetsika fanoherana ny fanonganam-panjakana, namoaka afisy misy ny lisitry ny ‘olona karohina‘ izay nahitana mpanao gazety marobe ny manampahefana miaramila.
Nandritra ny faran'ny herinandro, mpanao gazety roa no nampiana tao amin'ny lisitra tadiavin'ny miaramila ao Myanmar, ary nosamborina i Yuki Kitazumi, mpanao gazety mahaleo tena avy any Japana. Manameloka izao fanenjehana miharihary ny mpanao gazety izao ny @RSF_inter, izay ny 19 amin'izy ireo dia mety higadra amin'ny fotoana rehetra!
Nanoratra momba ny fiarovana tsy ampy natolotra an'ireo mpanao gazety mahaleo tena toa azy i Han Kha-yar, mpianatry ny oniversite ao amin'ny Fanjakan'ny Shan:
Fikambanam-baovao maro no tsy nanome karatra famantarana ho an'ny mpanao gazety, ary tsy manana rafitra fiarovana ho an'ireo mpanao gazetiny amin'ny toe-draharaha atahorana.
Nahatonga ahy hahatsapa ho tsy misy fanantenana, sy kivy amin'ny fanatontosana ny andraikitro amin'ny maha mpanao gazety ahy sy ny hoaviko ihany koa ity tsy fisian'ny fanohanana amin'ny fiarovana ity.
Na eo aza izany dia tapa-kevitra ny hanohy ny asa fanaovan-gazety izy mba hampiharihariana ny ‘tsy mety ataon'ny tafika':
Mino aho fa mila olona toa ahy ny vahoakako, izay eo an-toerana, mba hampiharihary ny tsy mety ataon'ny miaramila. Noho io antony io no nanapahako hevitra ny handa ny fisotroan-drononoko. Tapa-kevitra ny hanao asa fanaovan-gazety aho, raha mbola tsy voasambotry ny polisy sy ny miaramila.
Anisan'ireo nosamborin'ny fitondrana miaramila ny mpanao gazety vahiny. Voasambotra tamin'ny 18 Aprily noho ny fiahiahiana azy ho nanaparitaka ny ‘vaovao sandoka’ ilay mpanao gazety Japoney Yuki Kitazumi ary notanana efa ho efatra herinandro talohan'ny namotsorana azy ary nampodiana azy tany Japana. Taorian'ny nahatongavany tany Japana dia niresaka ny toe-javatra iainan'ireo gadra politika iharan'ny fampijaliana izy. Nitantara ny nanjo azy tany an-tranomaizina ihany koa izy:
Na dia tsy niharan'ny herisetra aza aho, dia nively mafy ny latabatra ny mpanao fanadihadiana rehefa nandà ny tsy hanao sonia ny fanambarana izay tsy tadidiko fa nolazaiko akory aho. Nampatahotra ahy izany.
Noterena handeha sesitany ny mpanao gazety
Rehefa nikendry ny fampitam-baovao ihany koa ny asan'ny mpitandro ny filaminana dia mpanao gazety maro no nitady fiarovana any amin'ny firenen-kafa. Nandositra tany Thailandy tamin'ny volana Martsa i Aye Min That, izay niasa ho mpitati-baovao tao amin'ny Reuters any Myanmar. Nolazainy tamin'ny Ivontoerana Iraisam-pirenena ho an'ny Gazety ny toe-javatra nahatonga azy hanapa-kevitra hiala tao Myanmar:
Nanapa-kevitra ny hiala aho noho ny fampitahorana mihabetsaka, indrindra ny polisy tonga any an-tranon'ireo mpanao gazety hisambotra azy ireo.
Niaina zava-mampatahotra vitsivitsy aho. Ny iray tamin'izany ny fisian'ny olona nijoro nanoloana ny tranoko rehefa tsy tao an-trano aho. Tokony ho olona dimy teo ho eo izy ireo no tonga tao an-tranoko ary nikapokapoka maharitraritra teo am-baravarako. Nisy namako iray tao an'efitranoko tamin'izay fotoana izay, tsy novohany ny varavarana fa henony izy ireo nilaza ny anarako sy ny adiresiko. Lasa izy ireo rehefa afaka kelikely, saingy tamin'izay fotoana izay dia hoy aho anakampo hoe: Tsy maintsy mandeha aho na iza na iza ireo olona ireo.
Tsy izay rehetra nandeha any Thailandy no afaka nanohy ny asany avy hatrany. Mpanangom-baovao marobe avy amin'ny Feo Demaokratika ao Burma (DVB) no nosamborin'ny manampahefana Thailandey noho ny ‘fidirana tsy ara-dalàna’. Taorian'ny fanentanan'ireo vondrona media manerantany ny famotsorana azy ireo dia nilaza ny DVB fa efa “any amin'ny toerana azo antoka” amin'ny firenena hafa ireo mpanao gazety voasambotra.
Afaka nitady fialokalofana tany amin'ny firenen-kafa ny mpanao gazety sasany toa an'i Mratt Kyaw Thu. Rehefa tonga tany Madrid i Thu dia nilaza tamin'ny AFP ny zavatra niainany teo am-pitsoahana ireo mpitandro ny filaminana tany Myanmar:
Miandry ny dondom-baravarana fotsiny isika rehetra. Indraindray ianao maheno olona miakatra amin'ny tohatra, ary toy ny hoe ho any aminao izy: manana izany fahatsapana izany foana ianao.
Na ny oram-be aza dia mety hahatonga ny olona hatahotra satria toa tahaka ny poa-basy izany indraindray.
Nampiany fa nahatsiaro tena ho meloka izy nandao an'i Myanmar, nefa manaiky ihany koa sady nahatsapa ny adidy tokony ataon'ny mpanao gazety:
Nanatevin-daharana ny herim-piarovan'ny vahoaka hiady amin'ny tafika ny namako sy ny dokotera sy mpampianatra sasany sady teo aho, ary izany no mahatonga ahy hahatsapa ho meloka.
Fa etsy ankilany, raha ny mpanao gazety rehetra no miady amin'ny tafika, iza no hanoratra vaovao?
Bokikely fampahalalam-baovao miafina sy ny asa filazam-baovao
Nahatonga ny olom-pirenena tsy hahazo vaovao tena manan-danja momba ny valan'aretina sy momba ny fanonganam-panjakana ny fanapahana tsindraindray ny aterineto sy ny fampiatoana ny fahazoan-dàlana ho an'ny media mpampahalala vaovao tsy miankina. Nahatonga ny olom-pirenena sasany voakasik'izany hamoaka bokikely milaza vaovao sy hizara izany miafina eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe izany. Ohatra roa amin'ireo gazetikely miafina ireo ny The Voice of Spring sy ny Molotov Bulletin.
Ny The Voice Of Spring (Feon'ny lohataona) miaraka amin’
Ny feon'ny fitokonana (amin'ny teny) Kalay.
Misaotra an'ireo rehetra nanatevin-daharana anay.
Tsy maintsy mandresy isika amin'ity indray mitoraka ity !!!
Nanontany an'ilay olona ao ambadiky ny Molotov momba ny fikasan'izy ireo amin'ny famoahana ity gazety ity ny Southeast Asia Globe:
Tsikaritray fa nanjavona ireo fifanakalozana vaovao rehefa tapaka ny aterineto, ary tsy nahalala ny zava-mitranga eny an-dalambe ny olona tany an-tranony ka vao mainka nampatahotra azy ireo izany. Namorona ny Molotov izahay mba hiadiana amin'izany.
Nozaraina tao Shwepyithar, Yangon androany (9 Apr) ny gazetikely Molotov manohitra ny fitondrana miaramila. Manasongadina an'i Thagyamin manao satroka aro loha ny fonony, manam-boninahitra politika ambony indrindra izay heverina fa hitsidika ny tany amin'ny andro voalohany amin'ny #Thingyan (fetin'ny taona vaovao) [izay manomboka amin'ny herinandro ambony].
Na eo aza ny fanafoanana ny fahazoan-dàlan'izy ireo amin'ny fampitam-baovao dia nanohy ny asany lehibe tamin'ny fanomezana vaovao ny vahoaka ny Mizzima. Milaza ny antsipirian'ny fiasan'ny mpanao gazety, ny tonian-dahatsoratra ary ny mpiasa hafa amim-pahavitrihana ao amin'ny Mizzima ity horonantsary fanadihadiana fohy ity na eo aza ny fandrahonana fisamborana sy fanagadrana azy ireo:
Ao amin'ny tapany farany amin'ny horonantsary, nanao voady hanohy ny asany ho an'ny fampitam-baovao tsy miankina ny mpiasan'ny Mizzima ary naneho ny fanantenan'izy ireo mbola hihaona indray ao amin'ny biraon'izy ireo teo aloha ao an-tanandehiben'i Yangon.
Miara-mijoro hatrany miaraka amin'ny vahoaka ao Myanmar izahay.
Tsy ho adinonay mihitsy ny sorona ataon'ny mpiasan'ny fampitam-baovao Mizzima izay notanan'ny fitondrana miaramila.
Hijoro ho fampitam-baovao tsy miankina hatrany izahay.
Hihaona indray any Yangon izahay rehetra.